Google wuxuu raacayaa wadadii Apple iyo Samsung oo kale kuma dari doono xeedho | Wararka IPhone
Iyadoo la raacayo isbeddel markii hore lagu tilmaamay mid muran dhaliyay, baadi goobka ayaa raaci doona wadadii Apple iyo Samsung oo kale: waxay tirtiri doontaa xeedhaha ku jira aaladaha xiga ee ay suuqa ka bilaabi doonto, laga bilaabo Pixel 6 iyo Pixel 6 Pro, laba terminaal oo heer sare ah oo ku dhici doona suuqa dayrta, jiil kaas oo sidoo kale la macno ah dib-u-habayn bilicsan oo muhiim ah marka la eego tilmaamaha, naqshadeynta oo waliba ku dari doona processor-kiisa gaarka ah oo lagu magacaabo Tensor ...
Sanadihii la soo dhaafay, Google waxay ku rartay 18W USB-C adapter-ka korontada taleefan kasta oo ay suuqa gelisay. Pixel -kii asalka ahaa ee la bilaabay 2016 waxaa ku jiray xeedho taas u dhigma midabka aaladdaLaakiin shirkaddu si dhakhso ah ayey u beddeshay maankeedii waxayna ku dartay saxan cad dhammaan aaladda dambe.
Pixel 5a xigta ee Google soo bandhigtay shalay, waxaa ku jiri doona xeedho Pixel 5a, terminal ah oo imaan doona dabayaaqada bishan Maraykanka iyo Japan marka hore. Google ayaa u xaqiijiyay Verge in telefoonada mustaqbalka ayaa tagi doona iyada oo aan lahayn xeedho. Sababaha shirkadu waa isku mid oo Samsung iyo Apple adeegsadeen waana in dadka badankiisu ay maanta leeyihiin fiilo USB-C.
Sidan, Google wuu awoodaa yaree ugu yaraan baakadaha Pixel 6 iyo Pixel 6 Pro cusubmaadaama ay meesha ka saareyso shaygii dhumuc weynaa ee dhaqan ahaan sanduuqa ku jiray.
Baabuurka 45-euro ee Yurub ($ 35 ee Mareykanka) ee Google ay si madax-bannaan u iibiso iyada oo loo marayo degelkeeda, waxay na siisaa pAwoodda ku-dallacidda 18 W oo ay ku jirto hal mitir fiilo lacag-bixin ah oo leh xiriir USB-C, qiimo la dhimi karo ka dib markii la go'aansaday in laga saaro baakada.
Marka laga hadlayo Samsung, xeedho jaban, waxaa lagu qiimeeyaa 25 euro oo Yurub ah (19 doolarka Mareykanka ah), qiimihii la mid ahaa xeedhaha aasaasiga ah ee Apple u diyaarisay macaamiisha doonaya inay iibsadaan. Labada xaaladoodba, xeedhuhu kuma jiro fiilada USB-C.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Google wuxuu raacayaa wadadii Apple iyo Samsung oo kale kuma dari doono xeedho